Soo dejisan G Data Total Security 25.5.5.43 – Vessoft
WindowsAmnigaDifaac guudG Data Total Security
Bogga rasmiga ah: G Data Total Security
G Data Total Security – xirmo amniga oo dhamaystiran oo leh dhammaan hawlaha lagama maarmaanka ah ee looga hortagayo khatarta noocyada kala duwan. Software wuxuu taageersan yahay xulashada hababka kala duwan ee nidaamka scan oo kuu ogolaanaya inaad hubiso dhakaatiirta la kala saari karo, xasuusta iyo barnaamijyada autorun ee cudurada. G Data Total Security wuxuu isticmaalaa teknooloojiyada falanqeynta habdhaqanka iyo farsamooyinka casriga iyadoo lala socdo baaritaanka saxeexa si loo ogaado fayrasyada, nacabka iyo hanjabaado aan badnayn. Dabka iyo farsamada difaaca akhlaaqda waxay si wax ku ool ah uga hortagaan hanjabaadaha shabakadaha iyo phishing, hubinta habka internet-bangiga ayaa ka hortagaya raadinta sirta, iyo filter spam waxay ka ilaalisaa e-maydka khatarta khatarta ah iyo fariimaha xayeysiiska. G Data Total Total wuxuu ka ilaaliyaa nugaylka amniga ee software la rakibay oo lagu kaydiyo macluumaadka asturnaanta ee kaydinta xogta lagu kaydinayo dadka aan fasaxnayn. Sidoo kale, G Data Total Security wuxuu taageersan yahay qalabka dheeraadka ah sida maamulaha sirta, sheyga faylka, gadaal, xakameynta waalidka, nadiifinta browserka, koontaroolka kumbuyuutarka ee la xiray iyo kor u qaadista kombiyuutarka.
Antivirus, antibiyootiko, antispam
Kahortaga hanjabaadaha internetka iyo weerarrada webka
Soo dejisan G Data Total Security
Faallo ku saabsan G Data Total Security
G Data Total Security Xirfadaha la xiriira